प्रणाली नेटवर्क ताराहरु मा विद्युत उपकरणहरू राख्दै परम्परागत योजना पर्खाल बढते प्रदान गर्नुहोस्। यो समाधान कारण धेरै लाभ र Ergonomics, स्थापना र सञ्चालनको सजिलो छ। र अझै, आउटलेटहरू सुनिश्चित गर्न मात्र सम्भव तरिका खुला योजना रिक्त स्थान मा एक तल्ला छ। अक्सर जहाँ तपाईं विद्युत निशान को एक न्यूनतम workload संग अनुकूलित शक्ति अंक को एक ठूलो संख्या राख्न आवश्यक कार्यालय भवन, सम्बन्धित छ। एउटा बन्द आवास-Hatches विशेष डिजाइन तल्ला आउटलेट यो समस्या मद्दत समाधान गर्न।
विशेषताहरु तल्ला आउटलेटहरू उपकरण
विद्युत विशेषताहरु मा यस्तो आउटलेट पूर्णतया आफ्नो पारंपरिक समकक्षों पालना। तिनीहरूले पनि नेटवर्क 220 जडान भएका छन् उपकरण र उपकरण को एक आपूर्ति प्रदान। सुविधाहरू नै उपकरण संरचना र अतिरिक्त माउन्ट हार्डवेयर छन्।
latching, केबल धारकों, क्लिप, विभाजन र अन्य सामान लागि calipers सेट कभर फ्रेम एक तल्ला आउटलेट समावेश मानक प्याकेज को सेट। यो टूलींग यो क्षति, दूषण र चिस्यान देखि सुरक्षा, यन्त्र सुरक्षित कार्यका लागि आवश्यक छ। एक ढक्कन यो तल्ला सकेट संग connectors र अन्य प्रकार प्रदान गर्न सकिन्छ। सुविधाको लागि एक प्याकेजमा इन्टरनेट केबल टर्मिनल, फोन लाइनहरु र अन्य संचार केबल रूपमा प्रदान गर्न सकिन्छ। सबै भर्ने ठाउँ बचाउँछ र स्थापना सुविधा जो एक फ्रेम, मा राखिएको छ।
साधन को किसिम
प्रमुख वर्गीकरण संकेत बीचमा समायोजन गर्ने क्षमता, एक माउन्ट एकाइ मा आउटलेटहरू संख्या र निर्माण को सामाग्री प्रदान गर्न सक्छन्। को समायोजन लागि जाँदा, त्यहाँ स्थायी fixation संग स्थापित तल्ला सकेट को स्थिर मोडेल हो, र त्यहाँ स्थिति र प्रालंब समायोजन गरेर उचाइ समायोजन गर्न सञ्चालन हुन सक्छ भन्ने उपकरणहरू छन्।
आउटलेटहरू संख्या अनुसार उपकरणहरू धेरै समूह छन्, तर मानक सीमा साधारण को 1-12 पीसी भित्र फिट। भौतिक प्लास्टिक र धातु प्रस्तुत। प्लास्टिक तल्ला सकेट विश्वसनीयता मा गुमाउनु र आक्रामक मिडिया सम्पर्क विकृत गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ, तिनीहरूले सस्ता र stylistic विभिन्नता को एक ठूलो दायरा प्रदान गर्नुहोस्। जंग सुरक्षा संग धातु थप ढाकिएको छ र टिकाउ, त्यसैले यस्तो शरीर संग मोडेल अक्सर सार्वजनिक ठाउँ र औद्योगिक परिसर स्थापित गर्न सिफारिस गरिएको छ।
तिनीहरूले छ रूपमा, र उपकरणको मुख्य विशेषताहरु हो, अझ विस्तृत विचार उचित बाहिरी आउटलेटहरू लागि कवर को विशेषताहरु। सुरु गर्न, यो त्यहाँ फ्रेम rosettes र परिमार्जन Lids हुनुहुन्छ कि emphasizing लायक छ। 75 100 औसत मा मिमी को एक गहिराई गर्न अद्वितीय बक्स मा स्थित पहिलो मामला receptacle पूर्वाधार मा। खैर, यो अक्सर नियमन विकल्प छ।
Lids संग मोडेल प्रत्यक्ष प्रदान आउटलेट स्थापना एक तल्ला आधार मा एक विशेष recess गठन बिना ताराहरु लाइन मा। एक सुरक्षा बाधा प्रालंब छल्ले, Clamps र अन्य सामान पूर्ण साथ सकेट लागि बाहिरी स्थापित शीर्ष रूपमा। प्रकार बिना केसिङ निर्माताहरु वृद्धि सुरक्षा गुण तिनीहरूलाई प्रदान गर्न सक्दो प्रयास गर्छन्। र Hatches र फ्रेम यांत्रिक क्षति, चिस्यान र पनि कम्पन देखि विद्युत भराई सुरक्षा विशेष कोटिंग्स प्राप्त।
तल्ला आउटलेटहरू स्थापना
स्थापना एक उठाएको तल्ला को रूप मा एक ठाउँ खाली प्रदान गर्नुपर्छ अघि बढाउन। माउन्ट सामान को एक सेट अक्सर आधार सामाग्री, जसमा एकीकृत उपकरणमा निर्भर छ - फ्रेम किरा तपाईं एक स्क्रू वा स्क्रू गरेर नियुक्ति आधार तय गर्न अनुमति दिन्छ।
फिलर leveler कोटिंग्स स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ र लगभग 80 मिमी को सस्तो प्लास्टिक आवास गहिराई र सेमी 20-30 मा जोडतोडले हुन दोस्रो embodiment औद्योगिक प्रयोगको लागि उपयुक्त छ गर्न सक्ने उच्च परिसर जस्ती -। यो भित्री सकेट विशेष दोहन देखि निकासी लागि डिजाइन गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा गम्भीर स्थापना अवस्था ठोस फर्श को मामला मा आउँदैन। पहिलो, कठिनाई स्थापनाका लागि सबैभन्दा आला शारीरिक गठन हुनेछ। दोश्रो, को निर्धारण प्वालहरू सिर्जना गर्न एक शक्तिशाली पंच वा पेचकस प्रयोग गर्न आवश्यक छैन। प्रदान क्लिप वा कोष्ठक प्रयोग गरेर आवरण को एकीकरण को स्थापना पूरा।
कम्पनी LEGRAND विद्युत उपकरण को खण्ड मा नेताहरूको छ, र यो प्रश्न श्रेणी मा उपकरण व्यापक यसको लामबद्ध मा उपस्थित छ भन्ने तार्किक देखिन्छ। ब्रान्ड को आउटलेट कस्तो भिन्नता छ? केही मतभेद, तर मुख्य एक साधारण सभा हो।
यसलाई मानक आवास माथि 12 सकेट गर्न शामिल सक्नुहुन्छ, तर यस मामला मा मोड्युलहरू अप 24 कनेक्टरों गर्न समावेश भने गरिएको छ। यसबाहेक, प्रत्येक अन्य मामलामा कार्यक्षमता इन्सुलेट, विभक्त प्यानल डिजाइन विकासकर्ताहरूले बनाउने सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित गर्न। LEGRAND एक सकेट र stylistic सुविधाहरू छ। को डिजाइनर फरक बनावट recreating, को सजावट मा Hatches प्रस्ताव। उदाहरणका लागि, यो गलैँचा, टाइल, काठ वा ढुङ्गा को शास्त्रीय प्रकार हुन सक्छ।
एक तल्ला आउटलेट छान्ने के विचार?
त्यो सञ्चालनको केही समय पछि सुरुमा भविष्यको लागि सकेट को प्रयोग को प्रकृति परिभाषित सिफारिस गम्भीर चोट लागेको तल्ला niches संग बक्स फुकाल्नु गर्न आवश्यक छैन थियो। तपाईं आफ्नो कार्यक्षमता विस्तार गर्ने योजना छ भने, यो खडा तल्ला फ्रेम मोड्युल एकीकृत गर्न अर्थमा बनाउँछ। न्यूनतम गहिराई गर्न डुबा कि Hatches संग पर्याप्त एकाइहरु 1-2 सानो डिजाइन आपूर्ति गर्न।
आवेदन आधारमा यो आवश्यक र तार नै सुरक्षा हुन सक्छ। केही embodiments मा, तल्ला सकेट bellows संग उपलब्ध छन्। त्यहाँ खडा तल्ला को काम क्षेत्रमा ठाउँ खाली छ भने यस्तो तार पाश प्रदान गर्न स्थान बाहिर छैन।
आउटडोर एकाइ मार्फत शक्ति संगठन छैन यो बजार को एक सम्पूर्ण खण्डको बोल्न सम्भव थियो, त्यसैले व्यापक छैन। कि बाहिरी विद्युत आउटलेट, बोट डिजाइन को intricacies साथै स्थापना को बिन्दुमा केबल को मार्ग को उपलब्धता लागि प्रदान तथ्यलाई। यस्तो योजना निर्माण त्यहाँ बिछाउने भने, यसको संगठन महत्वपूर्ण व्यय आवश्यक हुनेछ। या त बाटो, यस प्रकारको को सकेट प्रयोग को अभ्यास सारा सकारात्मक छाप छोड्छ। सदस्यहरूले समाधान, आफ्नो अनुकूलन प्रभाव सुविधाको नोट र केही अवस्थामा पनि परम्परागत नेटवर्क पूर्वाधार को व्यक्तिगत घटक पैसा बचत गर्नुहोस्।
गेट स्विंग गेट प्रकार र माउन्ट subtlety ड्राइभ
को भ्याकुम क्लिनर Aquafiltering: यो के हो र यसको फाइदा र बेफाइदा के छन्?
Coffered छत - राम्रो पुरानो भूल
एक अचम्मको साइड डिश एक बहुविध मा उबले सब्जिहरु जमेको छ
उपयोगी यदि सन porridge
दर्जा ग्याँस स्तम्भहरू: निर्माता, आकार, सञ्चालन र मर्मत। स्तम्भ बहने ग्याँस घरेलू